Hutano, 07 Chikumi 2019
Mutumbi waVaMasendeke Hauna Kutakurwa Sezvo Mapurisa Asina Mafuta eMotokari
VaTerrence Masendeke, avo vaive nemakore makumi maviri nemashanu, vakapfurwa vakafa kuminda yemangoda kwaChiadzwa kwaMarange mudunhu reManicaland musi wa 15 Chivabvu.
Vachipa mutongo wavo anyaya yakakwidzwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, achimirira mhuri yekwaMasendeke, mutongi wedare repamusoro, VaNicholas Matonsi, vati mhuri yekwaMasendeke inofanirwa kupihwa mukana wekuona mutumbi wemufi.
Mutumbi waVaTerrence Masendeke Woshata Uri Mumochari kuParirenyatwa
Mhuri yekwaMasendeke inoti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mutumbi wemwanakomana wavo uyo akapfurwa akafa kuminda yemangoda kwaChiadzwa kwaMarange mundunhu reManicaland.
Kushaya Simba kweMari yeMunyika Kwoderedza Huwandu hweMari yeAids Levy
Sangano reNational Aids Council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yeRTGS zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakaderedza zvakanyanya mari yarinowana kubva kumutero weAids levy.
Chikumi 02, 2019
Chiremba Vanorwira Kodzero dzeVanhu, Doctor Bonde, Vanoshaya
Sangano ravachiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZADHR razivisa nezvekushaya kwaDoctor Rutendo Bonde.
VaDumiso "The Black Russian" Dabengwa Vavigwa Zvine Mutsindo kuNtabazinduna
Mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichael Chideme, vaudza Studio7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti ivandudze mapombi avo emvura kuMorton Jaffray nekuWarren Control.
VaDabengwa Vashayikira muNairobi kuKenya Vari Munzira Kudzokera Kumusha
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo masikati, sachigaro webato reZAPU, VaIsaac Mabuka, vati VaDabengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira yekubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Nzvimbo idzi dzave nemakore anodarika gumi dzisingabude mvura mumatepi sezvo michina inopomba mvura pasisina, uye pombi dzemvura dzakabiwa.